Apple Inoburitsa Yekutanga Ad yeJames Corden's Carpool Karaoke Spin-off | Ndinobva mac
Kubva pakutanga, Apple haina kuvhura yavo mimhanzi yekushambadzira sevhisi seimwe sevhisi uko vashandisi vanogona kungonakidzwa nenziyo yavo yavanofarira, asi asi inodawo kupa zvemultimedia zvemukati, zvingave zviri muchimiro chemimhanzi mavhidhiyo kana zvirongwa yakagadzirirwa chete iyi chikuva chemimhanzi. Gore rapfuura Apple yakasaina James Corden, muridzi weCarpool Karaoke, chirongwa chakakurumbira cheterevhizheni umo Corden inobvunzurudza hunhu kubva kumatunhu ese enyika, kwete vaimbi chete, uye mavanoguma vachiimba rwiyo. Nyaya yakakosha munaGunyana 7, yakatanga naJames Corden naTim Cook mumotokari, vachisimbisa zviri pamutemo kusaina kweiyo yekupedzisira yeApple Music.
Mumwedzi yese yapfuura, James Corden anga achishanda pane ichave Carpool Karaoke spin-off inonzi Carpool Karaoke The Series uye iyo Cupertino-based kambani ichangotanga kushambadza kwekutanga kusimudzira ino nhepfenyuro nyowani inongowanikwa kune vese vanyori kubva kuApple kumhanyisa mimhanzi sevhisi. Mumushambadziro tinogona kuona huwandu hukuru hwevanyori vatinowana Will Smith, Billy Eichner, Metallica, Alicia Keys, John Legend, Ariana Grande, Seth MacFarlane, Chelsea Handler, Blake Shelton, Michael Strahan, John Cena, Shaquille O ' Neal ...
Muchirongwa chepakutanga, James Corden aigara achiwoneka achityaira mota achibvunza muenzi mibvunzo, achiimba rwiyo rwusinganzwisisike pamwechete uye nekumira kusinganzwisisike kune chimwe chiitiko chakarongwa. Asi mune ino spin-off Corden haangavi mumwe wehondo, Panzvimbo iyoyo, iye achave anogadzira Executive asi anozoonekwa zvishoma nezvishoma muzvikamu zvese, zvikamu zvinogara maminetsi makumi matatu.
James Corden acharamba aripo paCarpool Karaoke Iyo Late Show, asi iyo inoderedza kuburitswa kwezvirongwa zvayo kune imwe pamwedzi, panzvimbo pekutepfenyura kwevhiki nevhiki kwaaive ajaira vateveri vake. Parizvino hatizive kuti iyi 16-episode nhepfenyuro ichaburitswa zviri pamutemo mukati meApple Music, asi hazvifanire kutora nguva yakareba kana mazhinji ezvirongwa akatoratidzwa kuve neicho chiziviso chakatangwa nekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Inoburitsa Yekutanga Ad yeJames Corden's Carpool Karaoke Spin-Off
Valentine's Day Matemplate eMapeji, madhiri paMac App Store
Wepamusoro akanyanya kurodha emahara mafoto ekushandisa eMac